နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: 2103 နှစ်မြောက် ရှမ်းရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:46 AM
SZA September 17, 2008 at 12:26 PM
free for us? :p
if sai sai is there, at least, i mite buy ticket and come as supporting friend though :)
mabaydar September 17, 2008 at 6:16 PM
လာတော့လာချင်ပါတယ်.. အသိလဲတစ်ယောက်မှမရှိဘူး... လက်မှတ်ကလဲ အလကားမပေးရင်နေပါ... လျော့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားဦးမယ်.. ၃ဝ ၄ဝ ကတော့နဲနဲများသလိုပဲ.. ၁ဝ ၂ဝ ဆိုကောင်းမယ်..
Ko Boyz September 17, 2008 at 6:34 PM
တော်မီနဲ့ ချိန်းပြီး လာခဲ့ပါလား...။ တော်မီတောင် Plus 1 ဆိုပြီး စဉ်းစားနေတာ...။
khin oo may September 17, 2008 at 10:46 PM
ဒီက နာမည်ကြီး လွန်းလို. သိတ်ပြီး အပြင်ထွက် ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ မာမီလဲ ဖြစ်ချင်ဘူးလေ.။
Ko Boyz September 17, 2008 at 10:50 PM
အော်... အန်တီခင်ဦးမေကလဲ...။ ကိုယ်က ခပ်တည်တည်နဲ့ နေရင် ခင်ဦးမေဆိုတာ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့...။ ညှင်းညှင်းညှင်း...။ လက်မှတ်ကို စာတိုက်ကနေ ပို့လို့ရသလို လက်မှတ်ဖိုးကိုလဲ အွန်လိုင်းကနေ လွဲပေးလို့ရတယ်လေ...။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်...။
Taungoo September 17, 2008 at 11:03 PM
ကျွန်တော်လည်း တက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ လက်မှတ်မရလို့ တက်ချင်ရဲ့နဲ့ မတက်လိုက်ဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ရုံးက ခရီးတစ်ခုပို့ပေးမယ်ပြောနေတာ နိုဝင်ဘာထဲမှာပဲ။ ရက်မတိုက်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေရတယ်။ စရိတ်ငြိမ်းဆိုတော့လည်း လိုက်ချင်တယ်။ နှစ်ခုလုံးမလွှတ်ချင်ဘူး။
Ko Boyz September 17, 2008 at 11:06 PM
အေးဗျာ... လာနိုင်ရင် လာခဲ့စေချင်ပါတယ်...။
Freshup September 18, 2008 at 12:38 PM
ကျွန်တော်က စလုံးကဟုတ်ဘူးဗျ.. ဟီးဟီး.. :D